Myanmar Small Businesses Development: 2013
Posted by Myint Moe Chit at 5/25/2013 11:39:00 pm No comments:
ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု၊ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဈေးကွက်စံနစ် နှင့် အစိုးရ၏ အခန်းကဏ္ဍ (Private Property, Liberty, Market Mechanism and the Role of Government)
Justice by Edward Onslow Ford
ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အင်္ဂလိပ် တွေးခေါ်ပညာရှင် ဂျွန်လော့(ခ) (John Locke)နဲ့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ) (Jeremy Bentham)တို့ ဖေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို တင်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးဒဿန ပညာရှင် လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီ (libertarian) ပါမောက္ခ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)(Robert Nozick; 1938-2002)ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲဝေတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတော်နဲ့ ဈေးကွက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အမြင်ကို တင်ပြလိုပါတယ်။
ရောဘတ်နိုဇစ်(က)ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်၊ နိုင်ငံတော် နဲ့ သုခဘုံ (Anarchy, State and Utopia, 1974) ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ဂျရမီဘင်သမ်(မ) အဆိုပြုခဲ့တဲ့ အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ ချမ်းသာတဲ့သူတွေဆီက ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုယူပြီး ဆင်းရဲတဲ့သူတွေထံကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ တာဝန်ရှိတယ်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာညီမျှအောင် ပြုလုပ်ပေးရမယ် (distributive justice) ဆိုတဲ့အချက်ကို စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)က လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ အခွင့်အရေးဟာ အလွန်အရေးပါပြီး ချိုးဖေါက်လို့ မရနိုင်အောင် ခိုင်မာတဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘာမှသိပ်မရှိပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့အဆိုအရ နိုင်ငံတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ သဘောတူညီချက်ပဍိဉာဏ် တွေကို မချိုးဖေါက်အောင်တားဆီးဖို့နဲ့ ပြည်သူလူထုကို မတရားအနိုင်အထက်ပြုမှု၊ ခိုးဝှက်လုယူမှု၊ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုစတဲ့ ဘေးရန်တွေက ကာကွယ်ပေးဖို့ထက် မပိုသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ နိုင်ငံတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အဆင့်ထက်ပိုလာရင် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖေါက်ရာရောက်တဲ့အတွက် မလျှော်ကန်ဘူး၊ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ရပိုင်ခွင့်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို မချိုးဖေါက်သင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)ရဲ့အတွေးအခေါ်အရ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဟာ လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက်ကတဆင့် ဖြစ်တည်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဟာ ဘုရားသခင်ထံက ဆင်းသက်လာတာဆိုတဲ့ ခေတ်နဲ့မလျော်ညီတဲ့ ဂျွန်လော့(ခ)ရဲ့ အယူအဆပေါ်မှာ အခြေခံတာမဟုတ်ပါဘူး။
ရောဘတ်နိုဇစ်(က)က မည်သူတစ်ဦးတယောက်ကိုမျှ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒမပါဘဲ တခြားသူတွေကို ကူညီဖို့ အတင်းအကျပ် မစေခိုင်းသင့်ဘူလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကို ကူညီဖို့ ချမ်းသာသူတွေကို အခွန်ကောက်တာဟာ ချမ်းသာသူတွေကို အကျပ်ကိုင်တာဖြစ်တယ်၊ ဒါဟာ ချမ်းသာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို သူတို့စိတ်တိုင်းကျစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖေါက်တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)ရဲ့အဆိုအရ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စီးပွားရေးအရ ဆင်းရဲချမ်းသာ မညီမျှတာဟာ ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတချို့က ဒေါ်လာဘီလီယံချီချမ်းသာပြီး တချို့သူတွေ တစ်ပြားမှမရှိအောင်ဆင်းရဲနေတာကို မြင်ရုံနဲ့ စံနစ်တခုလုံးကို တရားတယ်၊ မတရားဘူး ကောက်ချက်ချလို့မရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တရားမျှတတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာခွဲဝေမှုဆိုတာ ဝင်ငွေညီမျှမှု၊ တန်းတူညီမျှပျော်ရွင်မှု၊ လူတစ်ဦးစီရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို မျှတအောင်ခွဲဝေမှု စတာတွေပေါ်မှာ မူတည်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ရောဘတ်နိုဇစ်(က)လက်မခံဘဲ တကယ်တမ်းအရေးကြီးတာက ဒီဥစ္စာဓန ခွဲဝေမှု ဘယ်လိုဖြစ်တည်လာသလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူ့ရဲ့အဆိုအရ ဥစ္စာဓနခွဲဝေမှုဆိုတာ လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်စံနစ်အတွင်းမှာ လူတွေရဲ. လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မှုကနေ ဖြစ်တည်လာတာဖြစ်ပြီး၊ တရားမျှတတဲ့ခွဲဝေမှုဖြစ်ဖို့အတွက် လိုအပ်ချက် (၂)ရပ်ရှိပါတယ်။ ပထမလိုအပ်ချက်ကတော့ လူတစ်ဦးအနေနဲ့ သူစီးပွားရှာရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ သွင်းအားစုတွေကို တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ ကနဦး တရားမျှတမှုဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယလိုအပ်ချက်ကတော့ လူတဦး ချမ်းသာတဲ့ စီးပွားဥစ္စာတွေဟာ လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်မှာ တရားမျှတစွာ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားခြင်းကတဆင့်၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားသူတစ်ယောက်က မေတ္တာဖြင့်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးကမ်းခြင်းကတဆင့် ရရှိလာခြင်းဆိုတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာလွဲပြောင်းတဲ့နေရာမှာ တရားမျှတမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်(၂)ရပ်နဲ့ ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင် လူတစ်ဦးအနေနဲဲ့ သူမှာရှိတဲ့ ဥစ္စာဓနတွေကို တရားမျှတစွာ ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ အခွန်ကောက်ခွင့်၊ သိမ်းပိုက်ခွင့်မရှိပါဘူးလို့ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)ကဆိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မတရား ခိုးဝှက်ရယူထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ချမ်းသာလာတာမဟုတ်ရင်၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမတရားစီးပွားရှာပြီး ကြွယ်ဝလာတာမဟုတ်ရင် လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်မှာ တရားမျှတစွာ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားရင်းနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝလာမှုမှန်သမျှဟာ ညီမျှသည်ဖြစ်စေ၊ မညီမျှသည်ဖြစ်စေ တရားမျှတတဲ့ ခွဲဝေမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ရှိချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို အစပြုခဲ့တဲ့ ကနဦး သွင်းအားစုတွေကို သူ့အနေနဲ့ တရားမျှတစွာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သလားဆိုတဲ့အချက်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့က မလွယ်ကူဘူးဆိုတာ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)က ဝန်ခံပါတယ်။ လူတစ်ဦးရဲ့ ယခုပဉ္စက္ခကာလ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ အဆိုပါလူရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ မျိုးဆက်တွေက သူတပါး ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြေယာ၊ အခြေပစ္စည်းစတာတွေကို အနိုင်အထက်သိမ်းယူ၊ ခိုးဝှက် လိမ်လည် လှည့်ဖြားပြီး ရယူထားတာတွေပေါ်မှာ အခြေမတည်ခဲ့ဘူးလို့ ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲလို့ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)က ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ လူတစ်ဦးရဲ့ လက်ရှိချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ အတိတ်ကာလက မတရားမှုတွေရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ရင်တော့ အခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ နစ်နာခဲ့သူတွေကို လျော်ကြေးအဖြစ် ပေးစေခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေသုံးပြီး ဒီလိုမတရားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကို ပြေပျောက်အောင် ပြုလုပ်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရောဘတ်နိုဇစ်(က) အလေးအနက်ထားပြောတာကတော့ ဒီလို အခွန်ကောက်ခံတာ၊ လျော်ကြေးပေးစေတာတွေဟာ အတိတ်ကာလက မတရားမှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် သက်သက်သာဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိကာလ ဆင်းရဲချမ်းသာ မညီမျှမှုကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)ရဲ့ အဆိုအရ လူတယောက် ဆင်းရဲတယ်၊ ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ လူတဦးချင်းစီရဲ့ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်နဲ့ ဈေးကွက်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရ အနေနဲ့ ဆင်းရဲချမ်းသာ မညီမျှလို့ ဆိုပြီး ချမ်းသာသူထံမှ အခွန်ကောက်ပြီး ဆင်းရဲတဲ့သူထံ ခွဲဝေပေးခြင်းဟာ လူတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက်ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းလို့ ဆိုပါတယ်။
သမာအာဇီဝနဲ့ ချမ်းသာလာတဲ့သူတွေဆီကနေ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေအတွက် အခွန်ကောက်ခံတဲ့ ဥစ္စာဓန ပြန်လည်ခွဲဝေခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့မှုကို ရောဘတ်နိုဇစ်(က)က ဝင်ငွေအလွန်ကောင်းတဲ့ အားကစားသမား တစ်ဦးကို ဥပမာပေးပြီး တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ် ဥပမာပေးရရင် ဒေါ်လာ ၁၇၅ သန်းချမ်းသာပြီး၊ တနှစ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၇ သန်းရှိတဲ့ ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ် ဆိုပါစို့။ သူရတဲ့ဝင်ငွေ၊ သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ သူဘောလုံး ကစားတာကို ကြည့်ချင်တဲ့ သူရဲ့ပရိတ်သတ်ရဲ့ အားပေးမှုကနေ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ် ဒီလို ဝင်ငွေရရှိတာဟာ လူတဦးချင်းစီရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူမှ နစ်နာတယ်လို့ အပြစ်ပြောလို့ မရပါဘူး။ သူကစားတာကို ကြည့်ချင်တဲ့ ပရိတ်သတ်က သူတို့ဆန္ဒ၊ သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်အရ လက်မှတ်ဝယ်တာဖြစ်ပြီး၊ မကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ပိုက်ဆံတပြားမှ အကုန်ခံစရာ မလိုပါဘူး။ ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ် အနေနဲ့လည်း ဒီလို ဝင်ငွေအမြောက်အများ ရရှိတဲ့အတွက် ဒီဘောလုံးကစားနည်းကို ကစားဖို့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒအရ ဆုံးဖြတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ လူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်စံနစ်ရဲ့ ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က ဒီလို နာမည်ကြီး အားကစားသမားတစ်ဦး ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတာကို စီးပွားရေးအရ မညီမျှမှုဘူး တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ပြီး ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကို ခွဲဝေပေးဖို့ အခွန်ကောက်ခံမယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြီး၊ လူတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်က ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အကျိုးဆက်ကို ပျက်ပြယ်အောင် လုပ်ဆောင်တာနဲ့ အလားသဏ္ဍန်တူတယ်လို့ ရောဘတ်နိုဇစ်(က) ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလို ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကို အကူအညီပေးတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုဖို့ ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်ရဲ့ ဝင်ငွေအပေါ်မှာ အခွန်ကောက်ခံခြင်းဟာ လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားရွေးချယ်မှုရဲ့ ရလဒ်ကို ဆန့်ကျင်ရာရောက်ရုံသာမက၊ သူ့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမှတဆင့်ရရှိတဲ့ ဝင်ငွေကို ဖြတ်တောက်ယူခြင်းဖြင့် ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေးကို ချိုးဖေါက်ရာလည်းရောက်ပါတယ်။
ရောဘတ်နိုဇစ်(က)အဆိုအရ ဒီလို သမာအာဇီဝနဲ့ လူတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ကြောင့် ဖြစ်တည်လာတဲ့ ဥစ္စာဓနအပေါ်မှာ အခွန်ကောက်ခံခြင်းဟာ ငွေရေးကြေးရေး ပြဿနာသက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ဦးရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ထိခိုက်စေတဲ့ ပြဿနာတရပ်ဖြစ်တယ်လို့ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)က ယုံကြည်ပါတယ်။ တကယ်လို့ နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်အားအပေါ်ကရရှိတဲ့ ဝင်ငွေအပေါ်မှာ အခွန်ကောက်ခံခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်၊ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အချိန် တစိတ်တပိုင်းကိုလည်း နိုင်ငံတော်က တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုရာရောက်တယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက လူတယောက်ဝင်ငွေရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုံး ကို အခွန်အဖြစ်ယူမယ့်အစား၊ သူကိုယ်ပိုင်အချိန်ရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုံးကို နိုင်ငံတော်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးဖို့ ညွှန်ကြားလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုတာပါဘဲ။ ဒီယူဆချက်အရ လူတယောက်ရဲ့လုပ်အားကရရှိတဲ့ ဝင်ငွေပေါ်မှာ အခွန်ကောက်ခံခြင်းဆိုတာ အတင်းအကြပ်အလုပ်စေခိုင်းခြင်း (forced labour)နဲ့ အလားတူတယ်လို့ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)က ယုံကြည်ပါတယ်။ တကယ်လို့ နိုင်ငံတော်မှာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အတင်းအကြပ် အလုပ်စေခိုင်းနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်၊ နိုင်ငံတော်က အဆိုပါလူပုဂ္ဂိုလ်ကို တစိတ်တပိုင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုရာရောက်ပါတယ်။ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)ရဲ့ အမြင်အရတော့ အခွန်ကောက်ခံခြင်း (လူတဦးရဲ့ဝင်ငွေကို ဖြတ်ယူခြင်း)ဆိုတာ အတင်းအကြပ်အလုပ်စေခိုင်းခြင်း (လူတဦးရဲ့လုပ်အားကို ရယူခြင်း)ဖြစ်ပြီး ကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင်စံနစ် (လူတဦးရဲ့မိမိကိုယ်မိမိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း)နဲ့ အလားတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရောဘတ်နိုဇစ်(က)ရဲ့ အထက်ပါ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒကို အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ ချမ်းသာတဲ့သူတွေထံက အခွန်ကောက်ခံပြီး ဆင်းရဲတဲ့သူတွေထံကို ခွဲဝေပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်ခံသူတွေက ကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ အဲဒီကန့်ကွက်ချက်အချို့နဲ့ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်တွေကို တင်ပြလိုပါတယ်။ ပထမ ကန့်ကွက်ချက်ကတော့ အခွန်ကောက်ခံခြင်းဆိုတာ အတင်းအကြပ် အလုပ်စေခိုင်းခြင်းလောက် မဆိုးဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ တကယ်လို့ အခွန်ကောက်ခံရတာကို မကျေနပ်ရင် လူတယောက်အနေနဲ့ အခွန်လျှော့ပေးရအောင် အလုပ်ကို လျော့လုပ်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ အတင်းအကြပ် အလုပ်စေခိုင်းခံရသူ အဖို့တော့ ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်ကတော့ လူတယောက်က အစိုးရကကောက်ခံတဲ့ အခွန်မပေးချင်လို့ အလုပ်ကိုလျှော့လုပ်တယ် ဆိုကတဲက သူ့ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကို အစိုးရအနေနဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းပါဘဲလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒုတိယကန့်ကွက်ချက်ကတော့ ချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့စာရင် ဆင်းရဲတဲ့သူတွေက ပိုက်ဆံပိုလိုအပ်တယ်၊ ဒါကြောင့် အခွန်ကောက်ခံတာ တရားမျှတတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေ တုန့်ပြန်တာကတော့ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေက ပိုက်ဆံပိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာ မှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်ကို ချမ်းသာသူတွေ သူ့တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုနဲ့ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကို ထောက်ပံ့ချင်အောင် ဆွဲဆောင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်အဖြစ်ဘဲ သုံးသင့်ပြီး ချမ်းသာတဲ့သူတွေဆီက အတင်းအကြပ် အခွန်ကောက်ခံတာကို တရားမျှတကြောင်းပြဖို့ မသုံးသင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေဆီက သူတို့ဆန္ဒမပါဘဲ အတင်းအကြပ်ယူပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို ခွဲဝေပေးခြင်းဟာ သူခိုးကြီး ငတက်ပြား လုပ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစိုးရတရပ်က လုပ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် အဒိန္နာဒါနကံ ကျူးလွန်ခြင်းဘဲလို့ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေက တုန့်ပြန်ပါတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ ဥပမာကတော့ ကျောက်ကပ်အစားထိုးဖို့လိုအပ်တဲ့ ဝေဒနာရှင်တဦးအနေနဲ့ ကျန်းမာတဲ့သူတယောက်ရဲ့ ကျောက်ကပ်နှစ်လုံးထဲကတလုံးကို လိုအပ်တာမှန်ပေမယ့် ဒီဝေဒနာရှင်မှာ ကျန်းမာတဲ့သူရဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ မဆိုလိုနိုင်သလို အစိုးရအနေနဲ့လည်း မည်မျှအရေးကြီးသည်ဖြစ်စေ လူနာကို ကုသဖို့ ကျန်းမာတဲ့သူရဲ့ ကျောက်ကပ်ကို အတင်းအကြပ်ထုတ်ယူခွင့် မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ လိုအပ်ချက်ကို အကြောင်းပြပြီး လူတယောက်ရဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်ခွင့်ကို မထိပါးနိုင်ဘူးလို့ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေက အကြောင်းပြပါတယ်။
တတိယကန့်ကွက်ချက်ကတော့ လူတစ်ဦးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ပြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာတာ သူတယောက်ထဲရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ချမ်းသာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှု အတွက် ပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတွေကို ပြန်လည်ပေးဆပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ တခြားသူတွေပေါ်မှာလဲ မူတည်နေတယ်ဆိုတာကို လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေက လက်ခံပါတယ်။ ဥပမာ ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ် တစ်ယောက်ထဲ ဘောလုံးကန်နေတာကို ကြည့်ဖို့တော့ လူတွေက တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ၂၇ သန်းပေးကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား ကစားဖက်တွေ၊ နည်းပြတွေ၊ အသင်းအုပ်ချုပ်သူတွေ၊ ဒိုင်လူကြီးတွေ၊ ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွင့်သူတွေ အစရှိတဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေမပါဘဲ ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်အနေနဲ့ ဒီလိုချမ်းသာကြွယ်ဝလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေက တုန့်ပြန်တာကတော့ ဒီလိုအထောက်အပံ့ပေးတဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်း သူတို့ရဲ့ ပံ့ပိုးပေးမှုတွေအတွက် ထိုက်သင့်တဲ့ ငွေကြေးရပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စတုတ္ထကန့်ကွက်ချက်ကတော့ ချမ်းသာတဲ့သူတွေကို သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒမပါဘဲ အစိုးရက အခွန်ကောက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီမိုကရေစီစံနစ်အောက်က ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ ချမ်းသာသူတွေအနေနဲ့ အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေကို ပြဌါန်းတဲ့နေရာမှာ သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားတွေ ပါဝင်ပြီးဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေက တုန့်ပြန်တာကတော့ ဒီမိုကရေစီအရ အများသဘောတူထားတဲ့ ဥပဒေတွေအရ အခွန်ကောက်ခံတယ်လို့ ဆိုရုံနဲ့ မပြည့်စုံဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ချမ်းသာသူအနည်းစုက ကန့်ကွက်တယ်ဆိုအုံးတော့ အများစုရဲ့ ဆန္ဒအရ ဒီဥပဒေတွေ အတည်ဖြစ်လာမှာဘဲလို့ တုန့်ပြန်ပါတယ်။
အထက်ပါကန့်ကွက်ချက်တိုင်းကို လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေက တုန့်ပြန်ချေပနိုင်ပေမယ့် နောက်ကန့်ကွက်ချက်ကတော့ အလွယ်တကူ တုန့်ပြန်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အဲဒီကန့်ကွက်ချက်ကတော့ လူတဦးချမ်းသာကြွယ်ဝလာတာဟာ သူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသာမက၊ ကံကောင်းလို့လဲဖြစ်တယ်။ ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစား ကံမကောင်းရင် ချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ် ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစား ခုလို ဘောလုံးအားကစား တကမ္ဘာလုံးကို ပြန့်နှံ့ပြီး ဘောလုံးသမားတွေ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ လူလာဖြစ်ရတာကတော့ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုလို့ မဆိုနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူရရှိတဲ့ ဝင်ငွေအားလုံးကို သူပိုင်လို့ လိပ်ပြာသန့်သန့် မပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အခွန်ကောက်ခံခြင်းဟာ မတရားလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေတုန့်ပြန်တာကတော့ ဒီလိုကန့်ကွက်ချက်ဟာ ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ ပါရမီကို သူပိုင်ဟုတ်မဟုတ် မေးခွန်းထုတ်တာဖြစ်ပြီး ဒီလိုယူဆခြင်းဟာ အန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ သူ့ရဲ့ ပါရမီ၊ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေရဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို အပြည့်အဝ ခံစားပိုင်ခွင့်ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်မှာ မရှိဘူးဆိုရင်၊ ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်အနေနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ မပိုင်ဆိုင်ဘူးလို့ ဆိုရာရောက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်အနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူ မပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်သူပိုင်သလဲလို့ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေက မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေရဲ့ အဓိကယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ့် လူတိုင်း မိမိကိုယ်မိမိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ လူတဦးချင်းစီရဲ့ ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်ခွင့်အခြေခံကို ရှာဖွေနေသူတွေအတွက် ကတော့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပါဘဲ။ လူတဦးချင်းဆီရဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ဘုရားသခင်ထံက ဆင်းသက်လာတာမဟုတ်သလို၊ နိုင်ငံတော်ကဖန်ဆင်းတာလဲမဟုတ်။ လူတိုင်း မိမိကိုယ်မိမိ ပိုင်ဆိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်ကတဆင့် မိမိရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ တရားမျှတစွာ သမာအာဇီဝကျကျ ရှာထားတဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ဘယ်သူကမှ ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ့မှ မချိုးဖေါက်နိုင်ဘူးလို့ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဆိုပါ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒ (libertarian) ဆိုတာ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက ဘာသာပြန်သလို စိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်ခွင့်လို့တော့ မဆိုလိုနိုင်ပါဘူး။ ၂၀၁၃ ခုမေလ ၄ ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ စာမျက်နှာ ၇ မှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်က စိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်စွာ လုပ်နိုင်ခွင့်ပုံစံ (libertarian model) ဟာ မြန်မာနိုင်ငံလို ဒီမိုကရေစီသက်တမ်းအားဖြင့် နုနယ်သေးတဲ့ မခိုင်မာသေးတဲ့ နိုင်ငံအတွက် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ မသေချာသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ libertarian ဝါဒ ဆိုတာ သူတပါးအကျိုးမထိခိုက်ရင်၊ သူတပါးရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို မထိခိုက်ရင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနေထိုင်ပြုမှုနိုင်တယ်၊ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကြောင့် စာရေးသူက libertarianism ကို လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒလို့ ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေကို မထိခိုက်သရွေ့ မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ မိမိရဲ့ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်၊ မိမိရဲ့ အသက်ရှင်သန်မှုနဲ့ မိမိရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို မိမိစိတ်တိုင်းကျ လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရာမှာ တခြားသူတွေရဲ့ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်း လေးစားရမယ်လို့ လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီတွေက ဆိုပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးအပါအဝင် ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါး (၂)ပုဒ်မှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ အခြေခံ သီအိုရီ (၃)ရပ်ကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီအိုရီတွေကို အခြေခံထားတဲ့ ဆင့်ပွားသီအိုရီတွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးတွေရဲ့အစမှာဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒီသီအိုရီတွေကို တင်ပြဆွေးနွေးရခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ တရားမျှတမှုရဲ့ အခြေခံအချက်တွေကို တွေးတောဆင်ခြင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လယ်ကွက်ကို နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းအတွက် သိမ်းယူခံလိုက်ရရင် လျော်ကြေးကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်သင့်ပါသလဲ။ တကယ်တော့ လျော်ကြေး မသတ်မှတ်ခင် ဒီလယ်ကွက်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဘယ်သူ့မှာ ရှိတယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ ဂျွန်လော့(ခ)ရဲ့ သီအိုရီအရ ဒီလယ်ကွက်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုနဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ လုပ်အားပေါင်းစပ်ထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ပိုင်ပါတယ်။ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ သီအိုရီအရတော့ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်မှုကို နိုင်ငံတော်က ဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်က ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကို အသိအမှတ်မပြုရင် ကျွန်တော်မပိုင်ပါဘူး။ ပါမောက္ခ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)တို့လို လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီ (libertarian)တွေ အဆိုအရကတော့ ဒီလယ်ကွက်ကို လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်ကတဆင့် တရားမျှတစွာ ရယူပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ဈေးနှုံးကို သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆောင်းပါးတွေမှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဈေးကွက်မှာ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားရာမှာ တရားမျှတမှုရှိဘို့ ဘယ်လိုဈေးနှုံးသတ်မှတ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ သီအိုရီတွေကို တင်ပြပါမယ်။
By Edward Onslow Ford [Public domain], via Wikimedia Commons
ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု၊ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဈေးကွက်စံနစ် နှင့် အစိုးရ၏ အခန်းကဏ္ဍ (Private Property, Liberty, Market Mechanism and the Role of Government) by မြင့်မိုးချစ် is licensed underaCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Posted by Myint Moe Chit at 5/11/2013 02:39:00 am No comments:
ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူထုအကျိုးစီးပွားနှင့် အစိုးရ၏ အခန်းကဏ္ဍ (Private Property, Public Interest and the Role of Government)
ယခင်အပါတ်က ဆောင်းပါးမှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ ဂျွန်လော့(ခ)ရဲ့ အဆိုအရ အစိုးရတရပ်ဟာ ဘယ်လို အကြောင်းနဲ့မှ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို မချိုးဖေါက်ရဘူး၊ မချိုးဖေါက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ဂျွန်လော့(ခ)ရဲ့သီအိုရီနဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အများပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို အစိုးရကချိုးဖေါက်နိုင်တယ်၊ ချိုးဖေါက်သင့်တယ်လို့ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ် တွေးခေါ်ပညာရှင်နောက်တဦးဖြစ်တဲ့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ) (၁၇၄၈-၁၈၃၂)ရဲ့ သီအိုရီကို တင်ပြပါမယ်။ဂျွန်လော့(ခ)ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ဘုရားသခင်က ဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီနဲ့ လုံးလုံးဆန့်ကျင်တဲ့ သီအိုရီကတော့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ) (Jeremy Bentham)ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ နိုင်ငံတော် (State) ထံမှ ဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီပါ။ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)က ဂျွန်လော့(ခ)ရဲ့ သဘာဝအရပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ လူမှုရေးသဘောတူညီချက် (Social Contract) ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေဟာ လုံးဝအဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ အမြင်အရတော့ ဘုရားသခင်က ဘယ်သူ့ကိုမှ သဘာဝအရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေ မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ခေတ်မှီတဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုကို ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာအယူအဆဟာ လက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အပြင် ဒီအယူပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေ ချမှတ်ဖို့ မလွယ်ကူဘူးလို့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)က ငြင်းချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၇၉၁ ခုနှစ် ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ သီအိုရီ (Theory of property and state)ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ မပါရှိပါဘူး။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဆိုလျှင် သဘာဝတရားက ဒါမှမဟုတ် ဘုရားသခင်က လူတွေကို ရပိုင်ခွင့်တွေပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ သီအိုရီကလက်မခံပါဘူး။
ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ အဆိုအရ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဟာ နိုင်ငံတော် (State) ထံက ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချုပ်အချာပိုင်နိုင်ငံရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှု၊ ကာကွယ်ပေးမှု မပါဘဲနဲ့ မည်သူမျှ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့်၊ မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တခြားသူတွေက ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုတာကို ထိမ်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီသီအိုရီအရ မည့်သည့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုမယ်၊ မည့်သည့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်မယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အရင်ပေးခဲ့တဲ့ဥပမာအရဆိုရင်တော့ လယ်ကွက်ကို ကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းသက်သေခံ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားတွေရဲ့ တရားဝင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဥပဒေတွေကို နိုင်ငံတော်ကဘဲ ပြဌါန်းနိုင်တာဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ လယ်ကွက်ကို တခြားသူတွေ မတရားလုမယူနိုင်အောင် နိုင်ငံတော်ကဘဲ အကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အဆိုအရ ပြည်သူတွေရဲ့ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ နိုင်ငံတော်က သဘောတူ သတ်မှတ်ပြဌါန်းထားတဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်ကွက်ကို အဖွဲ့အစည်းတခုက သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးပြုဖို့ သိမ်းပိုက်သွားတယ်ဆိုပါစို့။ တကယ်လို့ နိုင်ငံတော်က အဆိုပါ ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်ကွက်ကို တခြားလူက မတရားသိမ်းပိုက်သွားတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို လက်ခံပြီး သိမ်းယူသူကို သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုအတွက် ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးအရေးယူမှု မလုပ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ဘာမှတန်ဘိုး မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်ကွက်ကို သူတပါးက မတရား သိမ်းယူသွားတယ်လို့ ယုံကြည်ပေမယ့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဥပဒေအရ လယ်ကွက်ကို ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘဲ ယူသွားတဲ့သူမှာ အဲဒီလို ယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ပြဆိုထားရင် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ လယ်ကွက်ကို သိမ်းယူသွားတဲ့သူကို အရေးယူမှုပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာ ကျွန်တော်မှာ အဆိုပါ လယ်ကွက်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ တယ်လို့ ပြောဖို့တောင် ခက်ပါလိမ့်မယ်။ အထက်ပါ အခြေအနေမျိုးမှာ လူတစ်ဦးစီရဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုပေါ်မှာ မူတည်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုကို နိုင်ငံတော်က ဖန်တီးတယ်လို့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)က ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ကဆက်ပြောတာက ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို နိုင်ငံတော်က ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ အလျဉ်းသင့်သလို ဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်သလို အုပ်စိုးသူ၊ ဥပဒေပြုသူတစုရဲ့ အလိုဆန္ဒပြည့်ဖို့ ဖန်တီးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တခုနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို သတ်မှတ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ အဆိုတရပ်ဖြစ်တဲ့ လူအများစုအတွက် အမြင့်ဆုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာပျော်ရွင်မှုရရှိရေး (The greatest happiness for the greatest number) ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ဟာ utilitarianism လို့လူသိများတဲ့ အမြင့်ဆုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာ အတွေးအခေါ်ကို အစပြုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွေးအခေါ်အရဆိုရင် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ လူမှုရေး စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေ၊ ဥပဒေတွေချမှတ်ရာမှာ လူသားအားလုံးရဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို အမြင့်ဆုံးရရှိဘို့ ဦးတည်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလို မူဝါဒတွေချမှတ်ရာမှာ လူအနည်းစုအနေနဲ့တော့ နစ်နာမှုရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ အဆိုအရ ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ဆီမှာရှိတဲ့ ငွေ တစ်ထောင်ကျပ်ကို ယူလိုက်ရင် ဒီငွေပမာဏဟာ ချမ်းသာသူတစ်ဦးရဲ့ ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့မှု အတွက် ဘာမှမပြောပလောက်ပါဘူး။ ဒီငွေတစ်ထောင်ကျပ်ကို အလွန်ဆင်းရဲတဲ့သူတယောက်ကို ပေးလိုက်ရင်တော့ ဒီငွေပမာဏဟာ ဆင်းရဲတဲ့သူရဲ့ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့မှုအတွက် အလွန်တာသွားအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ရယူသူခံစားရတဲ့ ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့မှုဟာ လှုဒါန်းပေးအပ်သူရဲ့ခံစားရတာထက် ပိုတဲ့အတွက် ချမ်းသာသူပိုင်တဲ့ ငွေတစ်ထောင်ကိုယူပြီး ဆင်းရဲတဲ့သူတစ်ယောက်ဆီကို လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းက အသားတင် လူမှုရေးပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ ချမ်းသာတဲ့သူတွေဆီက ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုယူပြီး (ဆိုလိုတာက အခွန်ကောက်ခံပြီး) သင့်တော်တဲ့လူတွေထံကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)က ဆိုပါတယ်။
ဂျွန်လော့(ခ)ရဲ့ သီအိုရီလိုဘဲ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)သီအိုရီမှာ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ နိုင်ငံတော်အကြားဆက်နွယ်မှု၊ အဲဒီကမှတဆင့် လူတစ်ဦးချင်းစီနဲ့ နိုင်ငံတော်အကြား ဆက်ဆံရေးတွေအပေါ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု (၃)ချက် ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်ကတော့ နိုင်ငံတော်က မဖန်တီးခင်မှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဆိုလိုတာကတော့ နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်မပြုရင် လူတစ်ဦးချင်းစီမှာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုတာမရှိပါ။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကို ဈေးကွက်မှာ အရောင်းအဝယ်လုပ် လွှဲပြောင်းခွင့် မရှိခင် အစကနဦးမှာ ပစ္စည်းတခုကို ဘယ်လိုလူတွေက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်တဲ့ အဆုံးစွန်သော အာဏာဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လက်ထဲမှာသာရှိပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ နိုင်ငံတော်က ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကို ခွဲဝေချထားရတဲ့အတွက် ဒီလိုခွဲဝေရာမှာ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ဦးတည်ချက်တရပ်ရှိရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)အတွက်ကတော့ အဆိုပါ ဦးတည်ချက်ဟာ လူအများစုအတွက် အမြင့်ဆုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာပျော်ရွင်မှုရရှိရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အများပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်ဟာ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုတောင် လွှမ်းမိုးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ သီအိုရီအရ နိုင်ငံတော်ဆိုတာ အများပြည်သူရဲ့သက်သာဖူလုံရေး (public welfare)ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့၊ လူမှုရေးကျေနပ်ပျော်ရွင်မှု (Social Happiness) တွေကို အမြင့်ဆုံးရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးဖို့ ကိရိယာတန်ဆာပလာ တခုပါဘဲ။
တတိယအချက်ကတော့ ဒီလိုဦးတည်ချက်တွေ ပြည့်မြောက်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ လူတစ်ဦးတယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ရယူနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားဟာ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အကျိုးစီးပွားထက် သာလွန်ပါတယ်။ ဒီလို လူမှုရေးကျေနပ်ပျော်ရွင်မှုတွေကို အမြင့်ဆုံးရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကို ပြဌါန်းပိုင်ခွင့်ကို ကိုင်စွဲပြီး လူတစ်စုရဲ့ ဓနစီးပွားကို အခြားလူတစ်စုထံ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်တယ်လို့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)က ဆိုပါတယ်။
အရင်အပါတ်က တင်ပြခဲ့တဲ့ ဂျွန်လော့(ခ)ရဲ့ အစိုးရတရပ်ဟာ ဘယ်လို အကြောင်းနဲ့မှ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို မချိုးဖေါက်ရဘူး၊ မချိုးဖေါက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သီအိုရီနဲ့ ခုတင်ပြခဲ့တဲ့ တကယ်လို့ အများပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို အစိုးရကချိုးဖေါက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ သီအိုရီတွေဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ လက်ပန်းတောင်ပြဿနာက အစ အခြား ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ အရေးပါတဲ့ သီအိုရီတွေဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ခံ လူတန်းစားတွေ အတွက်ကတော့ ဂျွန်လော့(ခ)ရဲ့သီအိုရီကို သဘောတူကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုက အစိုးရတွေကတော့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ်ရာမှာ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ ဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ လူအများစုအတွက် အမြင့်ဆုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာပျော်ရွင်မှု ရရှိရေးဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်ကို အခြေခံကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီရဲ့ဖခင်နိုင်ငံကြီးလို့ ဆိုကြတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပုဂ္ဂလိကမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ မြေအောက် ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဗဟိုချက်နဲ့ မြေပေါ် စကြာဝဠာအဆုံးထိ ပိုင်ဆိုင်မှုလို့ တချိန်က အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။ အဲဒီလို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက် ကြက်ခြံပိုင်ရှင်တစ်ဦးက အနီးရှိ စစ်လေယာဉ်ကွင်းမှာ အတက်အဆင်းလုပ်ဖို့ သူရဲ့ကြက်ခြံအပေါ်မှာ စစ်လေယာဉ်တွေ ဖြတ်ပျံလို့ ကြက်တွေလန့်ပြီး ကောင်းကောင်းမဥနိုင်တဲ့အတွက် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ အမေရိကန်အစိုးရကို လျော်ကြေးရလိုမှုနဲ့ တရားစွဲခဲ့ဘူးပါတယ် [United States v. Causby 328 U.S. 256 (1946)]။ တရားရုံးက ဒီအမှုမှာ ကြက်ခြံပိုင်ရှင်ကို အနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်က ဒီလိုလျော်ကြေးပေးတာ ကြက်တွေကောင်းကောင်းမဥလို့ နစ်နာကြေးအနေနဲ့ ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ တရားရုံးရဲ့ အဆုံးအဖြတ်အရ ကြက်ခြံပိုင်ရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ကြက်ခြံအထက်က ဝေဟင်ပိုင်နက်ကို အမေရိကန်အစိုးရက ကျုးကျော်ခဲ့တဲ့အတွက် လျော်ကြေးပေးခြင်းဖြစ်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီတရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကတဆင့် မေးခွန်းထုတ်စရာရှိတာက ကြက်ခြံပိုင်ရှင်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားနဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး အောင်နိုင်ရေးဆိုတဲ့ အများအကျိုးစီးပွား ဘယ်အရာက ပိုအရေးကြီးသလဲဆိုတာပါဘဲ။ ဂျွန်လော့(ခ)ရဲ့ အစိုးရတရပ်ဟာ ဘယ်လို အကြောင်းနဲ့မှ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို မချိုးဖေါက်ရဘူးဆိုတဲ့ သီအိုရီကို သဘောတူလက်ခံတဲ့သူတွေတောင်၊ အများအကျိုးဖြစ်တဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး အောင်နိုင်ရေးအတွက် ကြက်ခြံပိုင်ရှင်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖေါက်သင့်တယ်၊ ကြက်ခြံပိုင်ရှင်ရဲ့ နစ်နာမှုဟာ ရရှိလာမယ့် လူအများစုရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် မပြောပလောက်ဘူးလို့ ဆိုကြမှာပါ။ ဒါဟာ အများပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို အစိုးရကချိုးဖေါက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့အဆိုကို သဘောတူခြင်းပါဘဲ။
ဒီလို လူအများစုရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိရောက်စွာ ဖေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို နိုင်ငံတော်က ဥပဒေတွေပြဌါန်းပြီး အသိအမှတ်ပြုပေးရမယ်လို့ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့နောက်လိုက်တွေက ဆိုပါတယ်။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီရဲ့မိခင်နိုင်ငံလို့ အသိအမှတ်ပြုကြတဲ့ အင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတောင် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ မြေယာ၊ မြစ်၊ချောင်းအင်းအိုင် အားလုံးကို နိုင်ငံတော်ကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကမှ ဥပဒေပြဌါန်းပြီး ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ််။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်ဥပဒေအရ ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ အလုံးစုံပိုင်ဆိုင်မှု မဟုတ်ပါဘူး။ ပစ္စည်းကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့် သတ်မှတ်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ မြေကွက်တကွက်ပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်ပြီးနေပိုင်ခွင့်ရှိပေမယ့် ဒီမြေကွက်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ သယံဇာတပစ္စည်းတွေကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ မြေယာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူ ကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာ အမွေဆက်ခံသူ မကျန်ခဲ့ရင် အဆိုပါပစ္စည်းကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့်ဟာ နိုင်ငံပိုင်ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့သီအိုရီရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ လူအများစုအတွက် အမြင့်ဆုံး ကောင်းကျိုးချမ်းသာပျော်ရွင်မှုရရှိရေးကို ဦးတည် ဆောင်ရွက်ရမယ်၊ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ တရားမျှတတယ် ဆိုတဲ့အယူအဆကို အတိုင်းအဆမဲ့ ကျင့်သုံးရင်တော့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ ရောမခေတ်တုံးက စစ်ပွဲတွေမှာ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေကို ခြင်္သေ့တွေရှိတဲ့ သားရဲတွင်းထဲ ပစ်ချပြီး ရောမဘုရင်နဲ့ ရိုမန်တွေ အပန်းဖြေကြပါတယ်။ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့သီအိုရီအရ ဒီသတ်ပွဲကို ကြည့်ရှုကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ထောင်သောင်းရဲ့ ပျော်ရွင်မှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ခရစ်ယာန် တစ်ယောက်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကနာကျင်ခံစားရမှုဟာ မပြောပလောက်တဲ့အတွက် ဒီအပြုအမူဟာ တရားမျှတပါတယ်လို့ ဆိုနိုင်စရာရှိပါတယ်။
မျက်မှောက်ခေတ်မှာလဲ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ အမြင့်ဆုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာ အတွေးအခေါ်ကို တဖက်စွန်းရောက်အောင် ကျင့်သုံးလို့ ပြဿနာဖြစ်ရတာတွေရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဥပမာတခုကတော့ မာလ်ဘိုရိုနဲ့ တခြားနာမည်ကြီးဆေးလိပ်တွေထုတ်တဲ့ ဖိလစ်မောရစ်ကုမ္ပဏီက ချက်ရီပတ်ဘလစ် (Czech Republic)နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ရသုံးငွေဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာ ဘယ်လို အကျိုးနဲ့အပြစ်တွေသက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ထားတဲ့ လေ့လာချက်ပါဘဲ။ အဲဒီလေ့လာချက်အရ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက အစိုးရအတွက် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် ရရှိစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေဟာ သူတို့အသက်ရှင်နေစဉ်မှာ နိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစံနစ်အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတခုဖြစ်သော်လည်း ဆေးလိပ်မသောက်သူတွေနဲ့စာရင် အသက်တိုတဲ့အတွက် အစိုးရအနေနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေကို ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပင်စင်၊ နေထိုင်စရာ စတာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အကုန်ခံစရာမလိုဘဲ အများကြီးသက်သာတယ်လို့ အဆိုပါလေ့လာချက်ကဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို ဆေးလိပ်သောက်သူတွေ အရွယ်မတိုင်ခင်သေဆုံးလို့ သက်သာတဲ့ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အသုံးစားရိတ်တွေနဲ့ ဆေးလိပ်ကရတဲ့ အခွန်အကောက်တွေ ပေါင်းလိုက်ရင် တနှစ်ကို တိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာ ဒေါ်လာ ၁၄၇ သန်းလောက်တိုးလာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် ဆေးလိပ်သောက်သူ တယောက် အရွယ်မတိုင်ခင်သေဆုံးရင် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေကို ၁၂၂၇ ဒေါ်လာ တိုးစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအစီအရင်ခံစာလဲ ထွက်လာရော သတင်းစာတွေ၊ ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးဆန့်ကျင်သူတွေက ဖိလစ်မောရစ်ကို ဝိုင်းပြီး ရှုံ့ချကြပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီအစီအရင်ခံစာက ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့သီအိုရီရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်ကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာပါဘဲ။ အဲဒီအားနည်းချက်ကတော့ လူတစ်ဦးရဲ့ နာကျင်ခံစားမှုနဲ့ အခြားလူတစ်ဦးရဲ့ပျော်ရွင်မှုတွေဟာ အရည်အသွေးတန်ဘိုးအားဖြင့် ဘာမှ ခြားနားမှု မရှိဘူးဆိုတဲ့ ယူဆချက်ပါဘဲ။ ရှိတ်(စ)ပီးယား၊ ဦးပုည၊ ဇော်ဂျီ၊ မင်းသုဝဏ် စတဲ့စာဆိုပညာရှင်တွေရေးတဲ့ ကဗျာ၊ပြဇာတ်တွေကို ဖတ်ရှုခံစားရာက ရရှိတဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏရဲ့ သမိန်ပေါသွပ်၊ တင်အောင်နီရဲ့ ပြာလောင် အစရှိတဲ့ ကာတွန်းတွေကို ဖတ်ရာကရတဲ့ ကျေနပ်မှုတွေဟာ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့အဆိုအရ အတူတူပါဘဲ။ ဒီအားနည်းချက်ကို ကျော်လွှားနိုင်ဘို့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ နာမည်ကျော်နောက်လိုက်တဦးဖြစ်တဲ့ ဂျွန်စတူးဝပ်မေးလ်က သူရေးသားခဲ့တဲ့ Essay on Utilitiarianism ဆိုတဲ့စာစုမှာ ပျော်ရွင်မှု၊ နာကျင်ခံစားရမှုတွေကို အရည်အသွေး ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ စာရှည်သွားမှာစိုးလို့ ဂျွန်စတူးဝပ်မေးလ်ရဲ့ အဆိုတွေကို အသေးစိတ် မတင်ပြတော့ပါဘူး။ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူတခုကို ဝေမျှရင်း ဒီဆောင်းပါးကို နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။
၁၈၃၂ ခုနှစ် အသက် ၈၄ နှစ်အရွယ်မှာ ဂျရမီဘင်သမ်(မ) ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်လို့ စာဖတ်သူ လန်ဒန်ကို ရောက်ခဲ့ရင် ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ဆီ အလည်အပါတ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)က သူမသေခင်မှာ အချိန်ပိုင်းလေးမှာ လူအများစုအတွက် အမြင့်ဆုံး ကောင်းကျိုးချမ်းသာပျော်ရွင်မှုရရှိရေးဆိုတဲ့ သူယုံကြည်တဲ့မူအရ ကွယ်လွန်သွားတဲ့လူတယောက်က ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့သူတွေအကျိုးအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ သူ့ကိုယ်သူ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ သူကောက်ချက်ချတာကတော့ လူတဦးအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ကျွင်းကျန်ရစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ခန္ဓာဗေဒပညာလေ့လာရာမှာ အသုံးပြုဖို့ လှုဒါန်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့လို အကျော်အမော်တွေးခေါ်ပညာရှင်တဦးအနေနဲ့တော့ နောင်လာနောက်သား တွေးခေါ်ပညာရှင် မျိုးဆက်တွေ အားကျဂုဏ်ယူနိုင်စေဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ ရုပ်ခန္ဓာကို ချန်ထားရစ်ခဲ့တာက ပိုပြီး အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)က ဆိုခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့သေတမ်းစာမှာ သူသေသွားတဲ့အခါ ကျွင်းကျန်ရစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆေးစိမ်ရုပ်လုံးသွင်းထားဖို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုမှာကြားချက်အရ ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ ဆေးစိမ်ရုပ်လုံးသွင်းထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် (Auto-Icon) ကို လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ် (University College London) မှာ ယနေ့တိုင် မှန်လုံအိမ်ထဲမှာထဲ့ပြီး ပြသထားပါတယ်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ ကျောင်းသားတစုက ဂျရမီဘင်သမ်(မ)ရဲ့ ဆေးစိမ်ခန္ဓာကိုယ်က ဦးခေါင်းကိုခိုးယူပြီး ပြန်လည်ရွေးယူဖို့အတွက် ကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတခုကို စတာလင်ပေါင်ငွေ ၁၀၀ လှုဒါန်းဖို့ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်က နောက်ဆုံးမှာ ၁၀ ပေါင်ပေးပြီး ရွေးယူခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတောင် ဂျရမီဘင်သမ်(မ)အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ လူအများစုအတွက် အမြင့်ဆုံး ကောင်းကျိုးချမ်းသာပျော်ရွင်မှုရရှိရေး ဆိုတဲ့မူကို စွဲကိုင်လျက်ရှိကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
နောက်ဆောင်းပါးမှာတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးဒဿန ပညာရှင် လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒီ (libertarian) ပါမောက္ခ ရောဘတ်နိုဇစ်(က)(Robert Nozick; 1938-2002)ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲဝေတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတော်နဲ့ ဈေးကွက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အမြင်ကို တင်ပြလိုပါတယ်။ (စကားစပ်မိလို့ ပြောရရင် libertarian ကို မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက စိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်ခွင့်လို့ ဘာသာပြန်ဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့ (၂၀၁၃ ခုမေလ ၄ ရက်နေ့) မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ စာမျက်နှာ ၇ မှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်က စိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်ခွင့်ပုံစံ (libertarian model) ဟာ မြန်မာနိုင်ငံလို ဒီမိုကရေစီသက်တမ်းအားဖြင့် နုနယ်သေးတဲ့ မခိုင်မာသေးတဲ့ နိုင်ငံအတွက် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ မသေချာသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ libertarian ဝါဒကို စိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်ခွင့်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ သူတပါးအကျိုးမထိခိုက်ရင်၊ သူတပါးရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို မထိခိုက်ရင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနေထိုင်ပြုမှုနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါကြောင့် စာရေးသူက libertarianism ကို လွတ်လပ်မှုအဓိကဝါဒလို့ ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝါဒအရ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရာမှာ တခြားသူတွေရဲ့ လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်း လေးစားရပါမယ်။)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJeremy_Bentham_by_Henry_William_Pickersgill_detail.jpg Henry William Pickersgill [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
Jeremy Bentham "Auto-Icon":
Harvard University's Justice (undated) Bentham, J. (1780) Principles of Morals and Legislation: available at: http://www.justiceharvard.org/resources/jeremy-bentham-principles-of-morals-and-legislation-1780/
Harvard University's Justice (undated) J.S. Mill, Utilitarianism (1863): available at:
ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူထုအကျိုးစီးပွားနှင့် အစိုးရ၏ အခန်းကဏ္ဍ by မြင့်မိုးချစ် is licensed underaCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Posted by Myint Moe Chit at 5/04/2013 04:44:00 pm No comments: